top 3 Goobaha Tareen ee ugu Fiican London | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > top 3 Goobaha Tareen ee ugu Fiican London
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 22/11/2021)
U.K. Raasamaalku wuxuu ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo loogu talagalay dadka safarka ah iyo kuwa maxalliga ahba. Laga soo bilaabo Big Ben iyo London Eye ilaa Westminster Abbey iyo Buckingham Qasriga – London waxaa ku yaal meelo badan oo la soo booqdo. Kadibna waxaa sidoo kale jira qaab-dhismeedka muuqda, nolol habeennimo hufan, iyo cunnada macaan. Si kastaba ha ahaatee, Waxa dadka intiisa badan ay ilaawaan waa in London ay sidoo kale tahay dhagax-tuur oo ka fog safarro badan safarka tareenka meelaha loo aado U.K. iyo Yurub.
Haddii aad rabto inaad ka baxsato cimilada caajiska ah ee London oo aad xoogaa qorraxdu soo qooto ama aad is dhex geliso taariikh cajiib ah, Waxaad ka heli doontaa meelo badan oo London ku wareegsan. Qeybta ugu fiican ayaa ah inaadan xitaa la dagaalamin safafka hubinta amniga ee garoonka diyaaradaha. halkii, Waxaad si fudud uga dooran kartaa meesha aad ku socotid oo aad tareen ka boodboodi karto mid ka mid ah saldhigyada badan ee London. Halkan waxa ku jira 3 Safarka Tareenka ugu Fiican ee laga tago London.
Soo jiidashada Sixirka ee Raacitaanka Tareenka
Haddii aad booqanayso London dhowr maalmood ama aad joogtid magaalada ilaa inta aad xasuusan karto, qaadashada a tareen kortaan waxay bedeli kartaa aragtidaada ku saabsan magaalada. Ka baxsan qaabka magaalo-madaxda, London waxa ku hareeraysan dad aad u badan tuulooyin qurux badan, magaalooyinka kulliyadda, xeebaha, iyo magaalooyinka taariikhiga ah.
Dhammaan meelahan si fudud ayaa loogu heli karaa tareen ka yimaada London, oo kuma qaadan doonto in ka badan laba saacadood inaad gaadho. Raacitaanka tareen ee London waa mid ka mid ah khibradaha Ingiriisiga ugu muhiimsan ee aad waligaa markhaati ka noqon doonto.
Laakiin qaybta ugu fiican ee ku saabsan safarradan tareenada ee London maaha meesha loo socdo. Safarka saacada qaatay wuxuu ku siinayaa aragti ah baadiyaha Yurub ee caadiga ah oo daadsan qalcado rustic ah, ilaha biyaha macaan, iyo kuraha rogroga.
Sidaas, iyada oo aan wax dheeraad ah lahayn, Aynu eegno xulashadayada meelaha ugu fiican ee safarka tareenka ee London.
1. Goobaha Tareen ee ugu Fiican London: Brighton
Haddii aad ka fekereyso inaad safar tareen ka raacdo London, Brighton waxay u badan tahay inay tahay meesha ugu horeysa ee maskaxdaada ku soo dhici doonta. Muujinaya xeeb dhagax ah oo nadiif ah, kafateeriyada hip, makhaayado cufan, iyo jidad dhuuban, Brighton waxay bixisaa nasasho soo dhaweyn ah oo laga helo nolosha magaalada ee fowdada ah.
Waxaa intaa dheer, Magaalada xeebta ku taal ee idyllic waxay hoy u tahay Pavilion Royal ee yaabka leh, Qasri 200-sano jir ah oo mar ahaan jiray dib u gurashada xagaaga ee Amiirka Wales. Caan ah oo loo yaqaan "Gaay Capital of the U.K", Brighton waxa kale oo ay hoy u tahay baararka saaxiibtinimada leh ee cajiibka ah iyo xaflad sannadle ah oo cajiib ah.
Ka dib markii la qooyay fallaadhaha qorraxda diiran, Socodka waddooyinka Brighton ee aan wanaagsanayn waxay kuu oggolaan doontaa inaad ogaato dhinac cusub oo magaalada ah. Waddooyinka cidhiidhiga ah waxaa ku yaal dukaamo xusuus-qoreed oo canabka ah, dukaamada rikoodhada vinyl, iyo goobo farshaxan oo soo jiidasho leh.
Ha iloobin inaad u istaagto koob kafee ah mid ka mid ah kafateeriyada macaan ee ku yaal waddooyinkan. Ama waxaad ku raaxaysan kartaa pint soo cusboonaysiinta mid ka mid ah jardiinooyinka biirka. Sidoo kale, Isha ku hay qaar ka mid ah tusaalooyinka nolosha ugu wanaagsan ee qarnigii 16aad.
Soo jiidashada kale ee Brighton waxaa ka mid ah Preston Park Rockery, taas oo ah beerta dhagaxa ugu weyn ee U.K, iyo sidoo kale Brighton Palace Pier oo qurux badan. Waxay u badan tahay daawaynta safra Solo sida ay tahay reeraha.
Haddi aad raadinayso safar maalmeed degdeg ah ama nasasho sabtida iyo axada ka London, Brighton waa doorasho aad u fiican. Ha iloobin inaad wax badan ka akhrido Waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Brighton, U.K., maalmaha fasaxa ah Markaad qorsheyneyso safarkaaga.
Ku Gaaritaanka Brighton Tareen
Waxa wanaagsan ee ku saabsan Brighton waa inaad magaalada kaga iman karto London ku dhawaad ​​hal saac gudahood. Tareenada Brighton taga mid walba 10 daqiiqado laga soo bilaabo saldhigyo kala duwan, oo ay ku jiraan saldhiga London Victoria iyo London St. Pancras station.
2. Goobaha Tareen ee ugu Fiican London: Stonehenge iyo Salisbury
Iyada oo leh Daar Dr Makumbe iyo daaraha waaweyn, U.K ma laha wax soo jiidasho leh oo loogu talagalay buffs taariikhda. Laakiin haddii aad rabto in khibradda ugu horreysa ee daawashada bogagga buugga taariikhda ay soo noolaato, Booqashada Stonehenge waa qasab.
Qaab dhismeedka dhagxaanta taariikhiga hore ee weyn, la rumeysan yahay in ka badan 5,000 sano jir ah, Waxay sii waddaa inay si isku mid ah u jahawareeraan taariikhyahannada iyo qadiimiga. Soo-booqdayaasha ma caawin karaan, laakiin waxay la yaaban yihiin sida ay waxdhisayaashu ugu suurtagashay inay u jiidaan dhagaxyada waaweyn ee meelaha ay hadda joogaan..
Ku yaal in ka yar 10 mayl u jirta Salisbury, Stonehenge waa tareen 90-daqiiqo ah u jira U.K. magaalada. Waxaad ka heli doontaa basas iyo tagsi badan saldhiga Salisbury kuwaas oo ku geyn doona goobta taariikhda hore.
Inta aad joogto, ha ilaawin inaad sahamiso meelaha kale ee soo jiidashada leh ee uu gobolku bixiyo. Kuwaas waxaa ka mid ah goobada alwaaxyada leh ee Woodhenge iyo hadhaagii darbiyada Durrington ee dahsoon.
Sidoo kale, waa fikrad wanaagsan inaad waqti ku qaadato magaalada taariikhiga ah ee Salisbury. U gudub Salisbury Cathedral ee qarnigii 13-aad oo hoos ugu sii soco Cathedral Close si aad u aragto Elizabethan iyo Victorian yaabab naqshadda. Ha ku mashquulin dukaamaysiga dheeraadka ah ee Suuqa Suuqa ka hor intaadan dejin pint oo biir ah kafateeri qurux badan.
Ku Gaaritaanka Stonehenge Tareen
Tareen u raac Salisbury oo ka soo qaado saldhiga London Waterloo. Markaad gaadho saldhiga Salisbury, Raac taksi gaar ah ama bas si aad u gaarto Stonehenge. Hubi inaad horay u sii qabsato socdaalkaaga Stonehenge.
3. Goobaha Tareen ee ugu Fiican London: Cotswolds
Waxaad ogtahay in meel ay mudan tahay in la booqdo marka loo qoondeeyay inay tahay "Aagga Quruxda Dabiiciga ah ee Sare". Iyada oo ay kuraha cagaaran ee cagaarka ah, beeraha ubaxa manicured, aqal-dhagax malab, iyo guryo aan caadi ahayn, Cotswolds waa sawirka candhuuf ee baadiyaha Ingiriisiga caadiga ah ee laga yaabo inaad ku aragtay filimada.
Cotswolds waa mid ka mid ah meelaha aanad u baahnayn inaad wax badan ka qabato ka bixista London. Soojiidashada caanka ah ee gobolka waxaa ka mid ah Tower Broadway, Burton-on-the-Biyaha, Biqil, iyo Qasriga Sudeley.
Ku Gaaritaanka Cotswolds Tareen
Aagga Cotswolds waxaa ku hareeraysan goob tareen oo saldhigyo tareen ah, oo ay ku jirto Banbury, Bath, Cheltenham, iyo Morten-in-Marsh. Sida ugu wanaagsan ee aad ku tagi karto Cotswolds ee London waa in aad tareen ka raacdo saldhigga London Paddington ilaa Morten-in-Marsh. Socodka tareenka ee 90-daqiiqo ah ayaa kugu abaalmarinaya views breathtaking ee baadiyaha Ingiriiska.
Marka xigta ee aad aragto naftaada oo u hamuun qabo fasax nasasho leh, waqti badan ha lumin qorsheynta. halkii, ka raac tareen ka mid ka mid ah saldhigyada London oo u baxso mid ka mid ah meelahan sawirka ugu fiican ee U.K.
Waxaan ku Save A tareenka aad bay ugu farxi doontaa inay kaa caawiso qorshaynta safarka kuwan Sare 3 Goobaha Safarka ugu Fiican ee London.
Ma waxaad dooneysaa inaad gashid bartayada internetka “Top 3 Meelaha Tareen ee ugu Wanaagsan ee Laga Yimaado London" ee ku socda goobtaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
BestTripDestinations	London	tareen safarka	safarka tareenka	TrainTripLondon
Socdaal waqti-dhiman ah iyo sahamin jecel inuu la wadaago khibradeeda qoraalkeeda. Waxaan aaminsanahay inaan u muujiyo aragtidayda si adag oo aan u garab istaago ficilladayda - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa La xiriir Rebecca